Global Voices teny Malagasy » Zeorzia/Rosia: Mamahana Mpandroba Sy Mpitsoaponenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Desambra 2018 16:38 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Sylvia Aimée
Sokajy: Rosia, Zeorzia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny Aogositra 2008)
Marobe ireo mponina tao Tbilissi no nivorivory nanoloana ny masoivohon'i Rosia tamin'ny Sabotsy mba hanohitra, amin'ny fomba mivazivazy, an'ireo fandrobana  (teny anglisy). Nandefa sary sady nanamarika koa an'io fanapahankevitra io i oleg-panfilov mpampiasa ny LiveJournal (teny rosiana) manao hoe:
«[…] .Nentin'izy ireo tany amin'ny masoivohon'i Rosia avokoa ireo vata fampangatsiahana, koveta fivoahana, taratasy fifirana, fera fipasohana, tavoahangi-na ‘vodka’, sotro rovitra sy sotro, fitafiana ary ireo fitaovana hafa izy mahaliana [ireo mpandroba avy amin'ny tafika rosiana ] (teny rosiana, lahatsary) nandritra ny fandalovan'izy ireo tany anaty tranon'ireo olontsotra Zoerziana, tao anatin'ireo Tranom-panjakana, ireo toby famaharana ary ireo tobin'ny tafika.
Mihamanatona ireo olona mba hijery akaiky, mihifikifi-doha, mihomehy. Mampaneno anjomara ireo fiara mandalo.
[sary enina  , kaonty nakaton'ny LiveJournal ]
Notsikerain'i tony-geo, mpampiasa LiveJounral ary monina ao Tbilissi (teny rosiana) ilay fitapitaka :
Fihetsiketsehana “Velomintsika ny tafika rosiana”
Ilay hetsika fotsiny dia efa mazava ho azy fa fitaovam-piadiana matanjaka ho amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe. Saingy fotsiny raha toa ka marobe ireo Rosiana afaka mahafantatra azy. Miahiahy anefa aho fa na [ny fandaharana amin'ireo vaovao Vremya eo amin'ny Channel 1  (teny anglisy)], na ny [fandaharana amin'ireo Vesti eo amin'ny RTR  (teny anglisy)] dia tsy handrakotra velively an'io hetsika io.
Hazavaiko. Vehivavy Rosiana iray, renina manamboninahitra Zeorziana, mivarahontsana, no milaza fa ny reniny ao [Kaliningrad  (teny frantsay)] dia tsy mahalala na dia kely akory aza mikasika izay mitranga ao Zeorzia ary mino fa mbola eo ampanafihana an'i Tskhinvali ihany ny tafika Zeroziana, feno fahasahiana sy arovan'ny tafika sovietika. Isaorana Andriamanitra, tsy nanozona ilay zafikeliny izy, izay mamono miaramila rosiana ao amin'io Tskhinvali io ihany.
Hamafisiko io tantara io. Niresaka tamin'ny anabaviko any Rosia aho omaly. Ara-ofisialy, Zeorziana ny anabaviko, saingy teraka sy lehibe tao Rosia izy, toa ahy, ary raha atambatra dia tsy nandalo afatsy herinandro vitsivitsy monja tao Zeorzia nandritra ny 30 taona niainany. Saingy notazoniny ny anaran'ny fahatanorany zeorziana rehefa nanambady izy […]. Na izany na tsy izany, izy ihany koa dia tsy mahafantatra velively izay mitranga. Ny ankamaroan'ireo olontsotra dia tsy mampiasa aterineto sy ny fahitalavitra amin'ny satelita mba hahazoana an'ireo vaovao azo antoka – izay asehon'ireo [fantsona an'ny Fanjakana Rosiana] no jeren'izy ireo. Nahoana no tsy ho gaga raha toa ny maro an'isa resy lahatra hoe tsy nivoaka an'i Tskhinvali […] ireo tarika rosiana?
Saingy tsy any ny olana. Ao amin'ny sekoly garabola iray [ao amin'ny tanàna iray ao Tbilissi], misy fianakaviana 110 mpitsoaponenana miaraka aminà ankizy marobe. Tsy mbola tonga any ny fanampiana ara-tsosialy hatreto. Avela ao fotsiny ry zareo dia izay, ampiana ianao rehefa misy ny fotoana. Ao amin'io sekoly garabola io, tsy mitovy amin'ny sekoly iray ao amin'ny faritra mitovy aminy ihany, fara-faharatsiny mba misy fandriana kely. Matory amin'ny tany avokoa ny ankamaroan'ireo olona. Tsy misy na bodofotsy na kidoro. Mihinana izay azony vidiana amin'ny ambim-bolany izy ireo. Azonareo tsara fa tsy dia misy vola betsaka tavela any amin'izy ireo. Omaly, indray mandeha ihany no naterina ny sakafo tao amin'io sekoly garabola io. Mofo efa ratsy. Siramamy fito kilao no omena fianakaviana miisa 110.
Omaly hariva, nitondra gony feno akanjo ho an'ireo ankizikely aho, izay efa noheveriko homena ny foibe fametrahana ny angona […]. Nitondra siramamy 20 kilao sy bolongana dobera iray tany ihany koa izaho sy ireo manodidina ahy. Androany, nitondrako voankazo izy ireo, ronono, [matsoni] ary ireo tatinjaza fanolo (couches).
Oadray, ry Zeorziana, ampy izay ny ady fanapariahambaovao. Tsiriho avy eny am-baravarankely, hita eto ireo sekoly garabola sy ireo sekoly hipoka mpitsoaponenana. Anatero izay mba azonareo omena izy ireo, ary avy eo mandehana any amin'ny masoivohon'i Rosia. […]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/05/131467/
 Nandefa sary sady nanamarika koa an'io fanapahankevitra io : http://oleg-panfilov.livejournal.com/580008.html
 [ireo mpandroba avy amin'ny tafika rosiana: http://cyxymu.livejournal.com/438495.html
 Channel 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_One_(Russia)